Guardiola oo isha ku haaya saxiixa xiddig ka tirsan Arsenal – Gool FM
Guardiola oo isha ku haaya saxiixa xiddig ka tirsan Arsenal
Dajiye June 20, 2022
(Manchester) 20 Juun 2022. Tababaraha Manchester City ee Pep Guardiola ayaa doonaya inuu kooxdiisa xoojiyo inta lagu guda jiro suuqa kala iibsiga xagaaga si ay isugu diyaariyaan caqabadaha xilli ciyaareedka cusub.
Sida laga soo xigtay warbixin uu daabacay wargeyska The Sun ee dalka England, daafaca reer Scotland iyo kooxda Arsenal ee Kieran Tierney, ayaa ku jira liiska xiddigaha uu bar-tilmaameedsanayo Pep Guardiola, maadaama ay jirto suurtogalnimo ah in Zinchenko uu ka tago Man City.
Wararka ayaa waxay intaas ku darayaan in xiddiga reer Spain ee Marc Cucurella uu ka mid yahay xulashooyinka la soo bandhigay ee uu doonayo Guardiola inuu ku xoojiyo booskan, laakiin kooxdiisa Brighton ay ka go’an tahay inay sii heysato, waxayna tani imaaneysaa iyada oo Chelsea ay xiiseyneyso adeegiisa sidoo kale.
Warbixinta ayaa tilmaamtay in City ay diiradda saari doonto ka mid noqoshada kooxaha xiiseynaya adeega Kieran Tierney, haddii ay dhacdo inay ku guuldarreysato inay hesho saxiixa Marc Cucurella, laakiin ma noqon doonto kooxda kaliya ee xiiseyneysa adeeggiisa, maadaama ay sidoo kale xiiseynayaan labada kooxood ugu waa weyn Spain ee Real Madrid iyo Barcelona.
Tierney oo 25 jir ah, ayaa u soo dhaqaaqay Arsenal 2019, wuxuuna u ciyaaray 86 kulan tartamada oo dhan, wuxuu u dhaliyay 4 gool, halka uu saaxiibadiis Gunners uu ka caawiyay 12 gool kale.
Del Piero oo shaaca ka qaaday fikirkiisa ku aadan dib ugu soo laabashada Pogba iyo Lukaku ee horyaalka Serie A
Arsenal oo qorsheyneysa inay lasoo saxiixato weeraryahan hore ee Real Madrid ah